Rohingya Students Forum: Islamot Mazé Biyátá Zindegir Laf
[အစ္စလာမ့်အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများ၏ ထွဋ်မြတ်မူ အကျိုးကျေးဇူးများ]
☞ Bála maiya uggúa deki 70 gua oulia tún aró beetór.
[ ကောင်းမွန်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ဝလီပေါင်း( 70 )ထက်သာမြတ်၏။]
☞ Hóraf maiya uggúa deki 1000 hóraf morot ottún aró bura.
[မကောင်းသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် မကောင်းသော အမျိုးသားပေါင်း( 1000 )ထက် သာပိုဆိုး၏။]
☞ Hámila maiya uggúar nomaz2rohat deki hámil sára maiya fuar 70 rohat tún aró bicí.
[ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏`နမာဇ် (2)ရကအသ်´သည် ကိုယ်ဝန်မရှိသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦး၏ `နမာဇ်( 80 )ရကအသ်သာ ပိုထွဋ်မြတ်၏။]
☞ Dud hába dé Maá ré dud fotti fúçar bodolat ekkán ekkán suwab dibo.
[ နို့ တိုက်ကျွေးသည့် မိခင်အား နို့ ရည်တစက်ခြင်းအပေါ်တွင်( သက်ရှိကိုရှင်စေသည့် )ကောင်းမူတစ်ခုကျစီ ချီးမြှင့်ခြင်းခံရ ပေမည်။]
☞ Fercani loí górot accé dé hócom oré busdi cánti rake dé bibi ré 1-2 wár jihad ór suwab dibo.
[စိတ်သောကနှင့် ပြန်ရောက်လာသူ ခင်ပွန်းသည်အား နှစ်သိမ့်သြဘာစကားဖြင့် အားပေးသူ ဇနီးမယားကို ဂျေဟာဒ်( 1 )ကြိမ် (2)ကြိမ်၏ ကုသိုလ်အကျိုးစဝါးဗ်ကို ချီးမြင့်ခြင်း ခံရ၏။]
☞ Dud habat rait bór gum zai no faredé Maá ré 20 wá gulam azad goijjé dé edun suwab dibo.
[ နို့ တိုက်ရ၍ တစ်ညလုံးမအိပ်စက်နိုင်သည့် မိခင်အား ကျွန်( 20 )သူကောင်းပြုသော အကျိုးစဝါးဗ် ချီးမြင့်တော်မူ၏။]
☞ Hócomebibi ré, bibi yé hócom oré adoror nozore sailé Allah ye ítara duiní zon óre rahamótor nozore saibuó.
[ခင်ပွန်က ဇနီးကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဇနီးက ခင်ပွန်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ ချစ်ခင်ကြင်နာသော အရူနှင့်ကြည့်ခဲ့ပါလျှင် အရှင်မြတ် ကိုယ်တိုင် ထိုဇနီးမောင်နှံအား`ရဟ်မသ်´ဂရုဏာတော်သက်
☞ Bibi ye hócom oré Allahr rastat diferái nize górot usulor uoré táile hócom ór 500 bosór age Jonnot ot zaibo.
70000 fírista lói hur okkól ór sóddar boni Jonnot ót gusol gorái hail fucak finái buo ar hail fattór ór tas finái gúrat súwar oí hócomór soñi gorí buo.
[ဇနီးက ခင်ပွန်းကို အလ္လာဟ်လမ်းတော်၌ စေလွှတ်ပြီး မိမိအိမ်တွင် စည်းကမ်းတကျ ကျင့်ကြံနေထိုင်လျင် ထိုဇနီးသည်အား ခင်ပွန်းထက်နှစ်ပေါင်း ( 500 )စော၍ ဂျန္နသ်သို့ ဝင်စေမည်ဖြစ်၏။]
ဖရိရ်ှသာပေါင်း( 70000 )နှင့် ဂျန္နသ်ရှိ ဟူးရ်ကညာပျိုများ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေမည့်အပြင် ထိုသူမအား
ဂျန္နသ်၌ ရေချိုးသန့် စင်စေပြီး မြစိမ်းရောင်ဝတ်စုံနှင့် မြမကိုဋ်သရဖူ အားဆောင်းစေပြီး မြင်းပေါ်တွင် စီးနင်းစေ လျက် ခင်ပွန်းအား စောင့်ကြိုစေမည် ဖြစ်၏။]
☞ Ze maá ye biraimma fuallá gúmzái nofarí biyaram gom gorí bólla kucíc gorí buo, íbaré Allah ye guná maf gorí di 12 bosór ór kobul oíyá ebadot ór suwab dibo.
[အကြင်မိခင်သည် ကလေးနာမကျန်းဖြစ်၍ မအိပ်ရသည့်အပြင် ကလေးသက်သာရန် ကြိုးစားနေပါက
အရှင်မြတ်သည် ထိုမိခင်၏ အပြစ်ဂိုနာဟ်များကို ခွင့်လွတ်တော်မူပြီး( 12 )နှစ်တာ ကဘူလ်ပြု လက်ခံပြီးသော အေဗာဒသ်၏ အကျိုးစဝါးဗ်ကို ချီးမြင့်တော်မူလေသည်။]
☞ Ze maiya fuwa ye ‘Bismillah’ forí dud dui buó, janwar íbayé duwa gorí bo.
[အကြင်အမျိုးသမီးသည်( ဗိစ္စမစ်လ္လာ )ရွတ်ဆို၍ နွားနို့ ညှစ်လျှင် ထိုသားကောင်က အမျိုးသမီးအား ဒိုအာပြုပေးပေမည်။]
☞ ‘Bismillah’ forí atha gúron, soil dúwa gorílé rizík ót borkot dibo.
[( ဗိစ္စမစ်လ္လာ )ရွတ်ဆို၍ ဂျုံနယ်ခြင်း၊ ဆန်ဆေးခြင်းများကိုပြုလျှင် ထိုအမျိုးသမီး၏ ရိက္ခာတွင်`ဗရ်ကသ်´မင်္ဂလာချပေးတော်မူ၏။]
☞ Osin mancó ré saito za de maiya fuwaré Allah ye laánót dibo.
Osin maiya fuwa ré soun zeen háram osin morot fuwain óre soun ó háram.
[သူစိမ်းအမျိုးသားကို ကြည့်ရန်သွားသော အမျိုးသမီး၏အပေါ်တွင် အရှင်မြတ်က လအ်နသ်ပြုတော်မူ၏။
ထို့ အတူ သူစိမ်းအမျိုးသမီးကိုကြည့်ခြင်း အမျိုးသားများအတွက်( ဟရာမ် )ဖြစ်သကဲ့သို့သူစိမ်းအမျိုးသားကို ကြည့်ခြင်းသည်လည်း အမျိုးသမီးများအတွက်( ဟရာမ် )ပင် ဖြစ်လေသည်။]
☞ Zikír gorí gorí gór kusa dé maiya ré kaábá córif kusaiyé dé edun suwab dibo.
[ဇိကိရ်ပြုလျက် တံမြတ်စည်းလှည်းသည့် အမျိုးသမီးအား ကအ်ဗာ ကျောင်းတော်ဝန်းကျင်၌ တံမြတ်စည်း လှည်းသည့် အကျိုးစဝါးဗ်ကို ချီးမြင့်တော်မူမည်။]
☞ Nomas Ruza forí nizor gaaré pak rakí córom gaáre hefazot gorí hócom ór kusail coó dé maiya fuwainóre Jonnot or añcto wán dorzattú ze honó ekkán baí góli fari bo.
[နမာဇ်/ရိုဇာမြဲပြီး ကိုယ်ကာယသန့် စင်မူကို ဂရုပြု၍ မိမိတို့ ၏ ကာအိနြေ္ဒကို စောင့်ထိန်း ပြီးလျှင် ခင်ပွန်းသည် ၏ အနွံတာခံသူ အမျိုးသမီးတို့ အတွက် ဂျန္နသ်သုခဘုံ၏ တံခါး( 8 )ပေါက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တံခါးမှ ဂျန္နသ် သုခဘုံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်၏။]
☞ Girós ottún dáiza goidé gulam ar hócom ór hókum no mane de bibir nomas matár uottún óddó no uríbo.
[သခင့်ထံမှ ထွက်ပြေးသည် ကျွန်၏ နမာဇ်၊ ခင်ပွန်းလင်၏ အမိန့် ဖီဆန်သည့် ဇနီးသည်တို့ ၏ နမာဇ်များ သည် ဦးခေါင်းထက်မှပင် အပေါ်သို့ မတက်နိူင်ပေ။]
☞ Hamila r rait deki ebadot, din deki ruza hísafe banai diyé.
[ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်၏ ညသည် အေဗာဒသ်၊ နေ့ သည် ရိုဇာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားလေသည်။]
☞ Fuwar muk deke de Maallá 70 bosórór Nomas ar Ruzar súwab amal namat lekí dibo.
Biíli maiyar dukkór ek ek rog ór bodolat ek biínnar ebadot ór súwab dibo.
[ကလေးမျက်နှာမြင်သည့်မိခင်အတွက် နှစ်ပေါင်း( 70 )နမာဇ် ရိုဇာ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရေးမှတ်ပေမည်။
[မွေးဖွားချိန်တွင် အနာတရဖြစ်လျှင် ဒုက္ခခံရသော အကြောမျှင်တစ်ခု( တစ်ခု )စီ၏အစား တစ်မနက်ခင်း ကြိုးပန်းသည့် အေဗာဒသ်၏ အကျိုး စဝါးဗ်အား ပေးသနားတော်မူမည် ဖြစ်၏။]
☞ Biíli maiya 40 dinnor bútoré entehal óilé cóhid ór zaga dibo.
[ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ရက်( 40 )အတွင်း ကွယ်လွန်သည့် မိခင်အား `ရှဟာဒသ်´၏ အဆင့်အတန်းကို ချီးမြင့်တော်မူပေမည်။]
☞ Raitta fuwa hanilé gail nodi dud hábaile ek bosór ór Nomas/ Ruzar suwab dibo.
[ည၌ ကလေးငိုသောအခါတွင် မကျိန်ဆဲဘဲနို့ တိုက်လျှင် တစ်နှစ်တားလုံး နမာဇ်/ရိုဇာ၏ အကျိုးများ ရရှိမည် ဖြစ်လေသည်။]
☞ Dud hába de okto furailé fírista uggúa ai jonnot ór khúc hoborí dibo.
[ နို့ တိုက်ကာလပြည့်မြောက်လျှင်( အသင်မအတွက် အရှင်မြတ်က ဂျန္နသ်သုခဘုံအား အတည်ပြုပြီး ကြောင်း ) ဖရိရ်ှသာ ကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးက ရောက်လာပြီး ( မိခင်ဖြစ်သူ၏ ပုခုံးကို ကိုင်၍ )
☞ Sófor ottún wafes aiccé dé hócom óre kérmos gore, hócom no tailé bewafa nogoré dé maiya fuwainnóre 12 bosór Nofolia ebadot goijjé dé edun súwab dibo.
[ခရီးမှပြန်လာသော ခင်ပွန်းအား(ခေသ်မသ်) ပြုစုကျွေးမွေးသည့် အမျိုးသမီး ခင်ပွန်းမရှိခိုက် ဖောက်ပြန်ခြင်း များလည်း မရှိခဲ့ပါလျှင်( 12 )နှစ်တာ နဖွိလ်အေဗာဒသ်၏ အကျိုးများ ရရှိပေမည်။]
☞ Hócomeno arái oré gaa sibi diyé dé maiyya fua ré Cúna7tula sodka goijjé dé súwab dibo. Arái óre goillé rufa7tula sodka goijjé dé edun súwab dibo.
[ခင်ပွန်းလင်က မစေခိုင်းသော်ငြားလည်း နှိပ်နယ်ပေးသော အမျိုးသမီးသည် ရွှေ(7)တိုလာ ဆွဒကာ ပေးလှူသည့် အကျိုးစဝါးဗ်များ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းလင်စေခိုင်းသဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးသော ငွေ(7)တိုလာ ပေးလှူသည့် အကျိုးစဝါးဗ်များ ရရှိပေမည်။]
☞ Hócom oré razi rakat moijjé dé bibillá Jonnot wajib.
[ခင်ပွန်း၏ သဘောတူကျေနှပ်မူရှိစဉ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဇနီးမယားအတွက် ဂျန္နသ်သုခဘုံ( ဝါဂျစ်ဗ် )ဖြစ်လေသည်။]
☞ Bibi ré Dini elóm ekkán cíkailé 80 bosórór ebadot ór súwab dibo.
[ဇနီးဖြစ်သူကို သာသနာ့သင်ခန်းစာတစ်ပုဒ် သင်ပေးခြင်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း( 80 )အေဗာဒသ် အကျိုးစဝါးဗ်များ ရရှိမည်ဖြစ်၏။]
☞ Osin ottún forda goro. Fatol hor finoya, Cáhawot ura, bimorom ore cahawat loi biraito soya, cúndor dehoya e.e maita fuwain deki jonnot ot goli nofari bo bolke Jonnot or kucbo óddo no faibo.
[သူစိမ်းများမှ( ပရ်ဒါ )လုပ်ပါ။ ပါးလွှာသည့်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်သောသူမ၊ တဏှာရာဂနိုးဆွသူမ သူစိမ်းအမျိုးသားများဘက်သို့တဏှာရာဂစိတ်ဖြင့် စွဲလန်းအောင်လုပ်သူမ၊ ဂုဏ်ပကာသနအလှချယ်ပြသူမ၊ ထိုအမျိုးသမီးတို့ သည် ဂျန္နသ် သုခဘုံ၌ မဝင်ရောက်ရ။ ဂျန္နသ်သုခဘုံ၏ အနံ့ ကိုပင် ရှူရှိူက်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ပေ။]
☞ Allah ré saitó Jonnoti ókkol ottún zaa foribó. Kintu forda nocin maiya ye saito Allah nize aibuó.
[အရှင်မြတ်အား ဖူးမျှော်ရန်အတွက် ဂျန္နတီများသွားကြရမည်။ သို့ သော် ကာအိနြေ္ဒစောင့်စည်း၍ ( ပရ်ဒါ ) လုံခြုံစွာနေထိုင်သည့် အမျိုးသမီးများ ဖူးမျှော်နိုင်ကြစေရန်အတွက်မာမူကား အရှင်မြတ် ကိုယ်တော်တိုင် ကြွရောက်လာတော်မူပေမည် ဖြစ်၏။]
☞ သင်အရှက် အိနြေ္ဒမရှိလျှင် ကြိုက်ရာလုပ်ပေတော့။ ဟဒီးစ်၊ အလ္လာဟ် သျှင် ကျနော်မျိုး မိသားစုနှင့်တကွ
အစ္စလာမ့် မောင်နှမများကို အသျှင်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းနေသွားနိုင်သည့် စွမ်းပကား ချီးမြှင့်ပေး သနားတော်မူပါ...အာမီးန်
Labels: Rohingyalish, ဘာသာရေး